I-Paradise Island Beach Club: 2-BR, Ukulala 6, Ikhishi - I-Airbnb
I-Paradise Island Beach Club: 2-BR, Ukulala 6, Ikhishi
Paradise Island, i-Bahamas
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Igor
Ukuze uthole iholidi elingalibaleki lase-Nassau Bahamas, balekela e-Paradise Island.
I-Paradise Island Beach Cub' villas inikezela ngendawo yokuhlala eyingqayizivele, enokuthula e-The Bahamas - izinyathelo nje ze-Atlantis edume kabi.
Jabulela i-condo yethu ehlotshiswe kahle, enefenisha ngokuphelele engu-2-Bedrooms etholakala endaweni yethu engaphambili yolwandle emangalisayo.
I-Paradise Island iyisiqhingi esinelanga esine-snorkeling engavamile, amabhishi amahle, nokuthenga okumangalisayo. I-Paradise Island iyindawo emangalisayo, neyothando.
I-Paradise Island Beach Club Villas izungezwe izintende zezandla ezinyakazayo kanye namahlamvu ashisayo, enikeza ukukhetha kokubuka kweGadi noma kwe-Ocean, womabili asezingeni eliphansi noma lesibili. I-Villa inikezela ngamamitha-skwele angu-1,100 wendawo yokuhlala ehlotshisiwe ephefumulelwe esiqhingini ethokomele ehlalisa abantu abangafika kwabayisithupha. Igumbi lokuhlala elibanzi livula ithala eliyimfihlo noma kuvulandi okuvumela izivakashi ukuthi zijabulele yonke imizwa yePharadesi.
I-Villa inikeza i-Master Bedroom Suite kanye ne-Guest suite, yomibili iphelele eneziqephu ezi-5 zokugeza zangasese zangasese, ezinezitsha zokugeza “ezakhe nezakhe” nobhavu onekhanda leshawa.
Uyathanda ukupheka? I-Villa yethu ihlinzeka ngakho konke ukunethezeka kwekhaya elinekhishi elihlome ngokuphelele elihlanganisa izinto zokupheka, isiqandisi, uhla oluphelele, i-microwave, umshini wokugeza izitsha, indawo yokudlela kanye negumbi lokuhlala elisemthethweni.
I-Villa ine-air conditioned futhi inabalandeli basesilingini kulo lonke.
I-TV yekhebula ne-Wi-Fi
I-Coffee-Maker & Toaster
I-Direct Dial Telephone (Izindleko zingasebenza)
I-ayina kanye ne-ayina ebhodiniIsomisi Sezinwele
Isevisi yansuku zonke yeMaid
Itafula nezihlalo kuthala/kuvulandi
Akukho zindleko zezingane
Azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe
Umshini wokuwasha izitsha
Donsela i-sofa endaweni yokuhlala ihlalisa izivakashi ezimbili ezengeziwe
Isofa lesitayela segumbi lokuphumula lilala elilodwa
Roll away iyatholakala ukuze ulale eyodwa
Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe SaseNassau sihamba imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 kuphela, kuye ngesiminyaminya.
I-Paradise Island iyisinqumo esihle kubahambi abathanda ukushisa ilanga, amabhishi nokuphumula.
I-Paradise Island Beach club iyindawo engaphambi kolwandle ehlala endaweni engamahektha angu-3.5. Umuzwa ovulekile we-tropical wezindawo ezishisayo udlulela ku-villa yakho. I-villa yakho iyindawo ekahle yokuhlala esiqhingini enazo zonke izinsiza ezitholakala kalula kanye nobumfihlo bekhaya.
Impahla enhle inamakamelo angama-44, ama-2 okulala, izindlu zokugezela ezi-2 ezinegumbi lokuhlala, igumbi lokudlela, ikhishi elihlome ngokuphelele. Isamba sezithombe eziyisikwele se-villa ngayinye ingamamitha-skwele angama-980. I-villa ingalala abantu abangu-6. Amakamelo alungiswa ane-master suite, umbhede olingana nenkosi, ikamelo lokulala labavakashi linemibhede emibili enosayizi ogcwele, imibhede ingaguqulwa ibe yinkosi futhi iguqulwe ibe yijunior suite okwenza ilungele imibhangqwana emibili. Igumbi lokuphumula livulekile, usofa unombhede wokudonsa. Konke kuqedwe ngemibala ephaphathekile egqamile nemibala efudumele, ehambisana nomhlobiso wesiqhingi. I-villa yakho iyindawo ekahle yokuhlala esiqhingini enazo zonke izinsiza ezitholakala kalula kanye nobumfihlo bekhaya.
I-Beachfront Paradise Ongayijabulela
Itholakala endaweni ethule yolwandle olumangalisayo, iParadise Island Beach Club iyindawo lapho kuhlangana ipharadesi nokunethezeka. Lapho izihlahla zesundu zihenguza khona emoyeni oshisayo wasolwandle kanye nokuntweza kwamanzi kuthinta usebe. Lapho i-ambience ethokozisayo nenika amandla igeleza kuwo wonke amayintshi e-resort yethu engaphambi kolwandle futhi ikuvusele enjabulweni yansuku zonke.
Indawo eshisayo, evulekile ye-tropical Island yeParadise Island inabela ezindlini zethu ezingu-44 ezishiswe yilanga ezinamakamelo azo amabili okulala abanzi, amagumbi okugeza amabili kanye namakhishi ahlome ngokuphelele. Hlala kuvulandi yakho yangasese noma uphumule ngohlelo lwakho lwethelevishini oluthandayo olulethwa yisathelayithi. Swisha emanzini amabili akumemayo amanzi ahlanzekile noma ungene olwandle olwandle lwethu oluhlanzekile. Kungakhathaliseki ukuthi wenzani e-Paradise Island Beach Club, uzojabulela ukungenisa izihambi kwekhwalithi ephezulu kanye nesevisi enobungane, enokunaka evela kubasebenzi bethu.
Ilondolo, ama-barbecue grills, amabhayisikili athokomele, kanye ne-WiFi kuzo zonke izindawo ezivundile—indawo yokuhlala e-Paradise Island Beach Club ihlanganisa zonke izinsiza nobumfihlo obujabulelayo nesizinda solwandle esishisayo osilangazelelayo. Isiqephu sakho sepharadesi silapha ukuze ujabulele e-Paradise Island Beach Club, ikhaya lakho kude nasekhaya.
Hlola ezinye izinketho ezise- Paradise Island namaphethelo